Hamrohealth, Author at hamrohealth - Page4of 6
बढ्यो कर्मचारीको तलब राजपत्र अनंकितलाई २० प्रतिशत र राजपत्र अंकितलाई १८ प्रतिशतले बढ्यो कर्मचारीको तलब कसको कति?
काठमाडौं– सरकारी कर्मचारीको तलब रकम बढेको छ। सरकारी सेवामा रहेका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुका लागि २० प्रतिशत र राजपत्र अंकित कर्मचारीका लागि १८ प्रतिशतले तलब बढेको हो।
महंगीभत्ता र पोशाक भत्ता यथावत राखिएको छ।
यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले घुमाउरो पाराले महंगी भत्ता २ हजार रुपैयाँ र पोशाकभत्ता ८ हजार बाट १० हजार रुपैयाँ बनाएको थियो।
कर्मचारीको तलब बढाउने गृहकार्य, पियनको २३ हजार पुग्न सक्ने
काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने गृहकार्य गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा न्युनतम १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
तर, गत वर्षहरुमा जस्तो सबै कर्मचारीहरुको समानुपातिक रुपमा तलब बढ्ने छैन । तल्लो तहका कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म बढाउन प्रस्ताव गरिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
आफ्ना लागि १ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमै घर र गाडी किन्नका लागि कर्जा उपलब्ध गराउन पनि कर्मचारीले जोड गरेका छन् ।
ट्रेड युनियनको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारीस्तरबाट सवारी साधन खरिद तथा मर्मतको कामलाई स्थगित गर्नुपर्छ ।’
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल टेलिकम सहितका सार्वजनिक सरकारी संस्थानहरुलाई सबल र सक्षम बनाउन निजामती कर्मचरीको लागि १० प्रतिशत शेयर सुनिश्चित गर्न ज्ञापानपत्रमा भनिएको छ ।यो खबर बैशाख १२ को अनलाइन खबरमा छापिएको छ।
न्यूनतम तलब ३५ हजार बनाउन निजामती कर्मचारीको माग
काठमाडौं, ११ जेठ । निजामती कर्मचारीले बजेटमा आधारभूत तहको न्यूनतम तलब स्केल ३५ हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६(७७ को बजेटका लागि निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले सरकारसमक्ष यो माग राखेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांकको तुलनामा कर्मचारीको तलबमान न्यून रहेको र जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक खाद्यवस्तु र सोबराबरको रकम विश्लेषण गर्दा न्यूनतम तलबमान ३५ हजार हुनुपर्ने माग कर्मचारीको छ ।
यस्तै कार्यालय सहयोगी र मुख्य सचिवको तलबमानको १ .५ को अनुपातमा हुनुपर्ने माग राखिएको छ । अहिले कार्यालय सहयोगीको तलब स्केल न्यूनतम १६ हजार २३० रुपैयाँ र मुख्य सचिवको ५५ हजार २०० रुपैयाँ छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा २६ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको र मूल्यवृद्धि पनि ४।६ प्रतिशत मात्र रहेकाले तलब बढाउन सकिने आधार देखिएको कर्मचारीको तर्क छ ।
समाचार स्रोत NP NEWS
नागरिक लगानी कोषको राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक जीबन बीमासम्बन्धी सूचना !!!
नेपाल सरकारको आब २०७५/०७६ को बजेट बक्तब्यमा उल्लेख भए बमोजिम सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई साबधिक जीवन बीमा योजनामा सहभागी गराउनअ लागी नेपाल सारकार मंत्रीपरिषदको मिति २०७५/०८/०३ को निर्णय बाट “राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको साबधिक जीवन बीमा सञ्चालन कार्यबिधि २०७४”स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा अईसकेको जानकारी गराउँदै सो सम्बन्धी निम्नानुसार गर्नु गराउनु हुन भन्दै नागरिक लगानी कोषले सम्बंधित सबैमा सूचना जारी गरेको छ /
हेर्नुहोस बिस्तृत बिबरण समेटिएको नागरिक लगानी कोषको सूचना